tutorial BINANCE - Talooyin iyo tabaha Binance
Iibsashada, iibinta, damaanad qaadka ama keydinta shaybaarkaaga ayaa noqda ciyaarta carruurta ee isweydaarsiga Binance. Soo ogow cashar buuxa, talo farsamo, wararka Binance Kaarka loo isticmaali karo dhammaan ganacsatada iyo sidoo kale BNB crypto iyo nidaamkiisa lacag celinta ee ilaa 8%.
Isdiiwaangeli Binance tutorial
Isweydaarsiga n ° 1 adduunka.
Binance waa shirkad ku qoran in ka badan $ XNUMX bilyan. Sida isweydaarsi kasta, waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku beddelato cryptocurrencies kale (bitcoin, ethereum, tether ...) ama lacagaha fiat sida euro ama dollar.
In ka badan 15 milyan oo isticmaale
Sannad kasta, in ka badan 15 milyan oo isticmaale ayaa iibsada oo ku beddelashada ku dhowaad $ 2 bilyan oo loo yaqaan 'Cryptocurrency on' Binance.
Kaarka bangiga Visa
Iyada oo la Fiiso Binance, waad u rogi kartaa oo aad ku qarashgareyn kartaa cryptocurrencies aad jeceshahay in ka badan 60 milyan oo dukaanno iyo ganacsiyo adduunka ah.
Dulsaar inta la keydinaayo
Debaaji oo hayso cryptocurrency. Intaad xiiseyneyso, waxaad leedahay dabacsanaan aad ku sameyn karto ka bixitaan ama macaamil ganacsi wakhti kasta.
250 cryptocurrencies ayaa la heli karaa.
Qiyaasta ganacsiga maalinlaha ah oo ah 2 bilyan oo doolar.
Iibso oo ku iibso cryptos daqiiqado gudahood Binance. Ku soo biir madal is weydaarsiga ugu weyn adduunka ee 'crypto'. La soco qayb ka mid ahecosystem Binance iyo Cryptos la xidhiidha.
Waxaa laga heli karaa Mobile (Android iyo IOS)
Waxaa laga heli karaa internetka kombiyuutarka
Sida loo diiwaangaliyo oo loo furto xisaab Binance ?
Ku billow diiwaangelinta adoo raacaya tillaabooyinka kala duwan. Kadib u tag sanduuqaaga si aad u ansaxiso emailka laguu soo diray Binance. Dhagsii xiriirka uu ka kooban yahay si loo xaqiijiyo cinwaanka emaylkaaga, kaas oo kuu oggolaanaya inaad dhaqaajiso koontadaada.
Markaad dib u noqotid Binance, dhagsii xiriirka "Log in".
Waxaan kugula talinayaa inaad aado URL-ka: https://www.binance.com/fr/my/settings/profile. Boggan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad bilowdo hubinta koontadaada.
Sida loo hubiyo koontadaada iyo boorsada jeebka Binance (1/3)?
Hadda waxaan sugeynaa xisaabtaada si aan uga hortagno jabsi kasta. Si tan loo sameeyo, tag URL-kan: https://www.binance.com/fr/my/security
Dhowr heerar nabadgelyo ayaa lagula talinayaa sida aqoonsiga Google oo ay weheliso xaqiijinta Emailka. Isla marka aad dhaafto dhowr boqol oo Yuuroo oo loo yaqaan 'crypto', waxaan kugula talinayaa inaad iibsato buug kale oo dheeri ah sida YubiKey.
Kani waa barnaamij bilaash ah oo moobiil ah oo kuu oggolaanaya inaad abuurto nambarka hawlgelinta 30-kii ilbidhiqsi kasta. Waxaan aad ugula talinayaa.
Kani waa emayl ay soo direen Binance oo ka kooban lambar 6 lambar ah. Macaamil kasta, waxaad u baahan doontaa inaad gasho lambarkan. Dhinaca kale, kuma talinayo xaqiijinta Google oo ay weheliso SMS, bedelkeedna emaylka.
Sida loo sugo koontadaada ee KYC ee Binance (2/3)?
Si si buuxda looga faa'iideysto adeegyada Binance oo aad xaddiddo xayiraadaha, waa inaad ansaxisaa KYC-gaaga (Ogow Macaamiilkaaga). Waxaad awoodi doontaa inaad aqbasho oo aad la baxdo qaddarro badan, dalbo Visa Visa-gaaga Binance, marin u hel Launchpad iyo mustaqbalka ganacsiga.
Si taas loo sameeyo guji batoonka Xaqiijinta aqoonsiga. Tani waa geedi socod 2-talaabo ah. Waxaad buuxineysaa aagagga lagama maarmaanka ah markaa waxaad soo diri doontaa mid ka mid ah lifaaqyada la codsaday (dukumeenti aqoonsi oo laba-dhinac ah, ama baasaboor, ama liisanka darawalnimada.)
⚠️ taxaddar, waxay eegaan taariikhda uu dhacayo, tayada sawirka, iyo lambarrada oo dhan haddii la aqoonsan karo. Haddii diidmo jirto, qasab maahan inay kuu sheegaan sababta, laakiin hadda ayaan iyaga kaaga soo xigtay.
Ku hubso koontadaada aqoonsiga wajiga (3/3).
Tani waa tallaabada ugu dambeysa. Kaamiradaada internetka, kombiyuutarkaaga ama taleefankaaga, waa inaad raacdaa tilmaamaha. Iska siib koofiyadda, muraayadaha indhaha, iwm. Wejigaaga waa in loo dhigaa xagga hore ee wareegga loogu talagalay ujeedkan. Waxaa laga yaabaa inay ku weydiistaan ​​inaad libiqsato, madaxa wareejiso, midig iyo bidix u eegto ...
Waxaad heli doontaa jawaab haddii tallaabadaasi lagu guuleystay iyo in kale. Xaaladda jirta, waa in dib loo cusbooneysiiyo illaa laga ansaxinayo.
Sida loo iibsado cryptos on Binance kaarkiisa bangiga?
Haddii aad rabto inaad maal gasho oo sidaas darteed ka iibso cryptocurrencies on Binance kaarka bangiga (fiisada, MasterCard), dhagsii tabka "Soo iibso cryptos, ka dibna Bank / debit card".
Muuji lacagta euro ee macaamilka la doonayo
Muuji cryptocurrency aad rabto inaad hesho. Sida caadiga ah, waxaan kugula talinayaa inaad iibsato USDT. Laga soo bilaaboUSDT, waad iibsan kartaa nooc kasta oo kale oo loo yaqaan 'cryptocurrency'. Binance ayaa ku siin doona liis go'an oo ay ku jiraan bitcoin (BTC). Sidaas darteed haddii aad rabto inaad iibsato Bitcoin, xulo Bitcoin, dabcan.
Xulo Kaarka amaahda ama kaarka cusub, markaa iibsadaan.
Sida loo iibsado cryptos on Binance Wareejinta siligga?
Haddii aad rabto inaad ku iibsato cryptocurrencies on Binance ka soo wareejinta bangiga (sepa), dhagsii tabka "Iibso cryptos, ka dibna dhig Bangiga".
Hubso inaad ku jirto Wareejinta SEPA
Sheeg lacagta aad rabto inaad dhigato Binance, ka dibna riix Continue.
Binance ayaa markaa ku siin doona faahfaahinta bangigooda.
Marka la eego taas Binance uusan ku sii dhex jirin Midowga Yurub, ka dib Brexit, waxaan si adag kugula talinayaa inaad tagto miiska bangigaaga ama inaad wacdid bangigaaga si uu ugu dhigo lacag dhigista SI GAAR AH waa laga yaabaa diiwaanka Binance ka-faa'iideyste cusub macaamiladaada soo socda ... IYO SIDOO KALE ma iloobo inuu sheeg "Xeerka Tixraaca" kahor intaadan wareejinta samayn.
Magaca Ka-faa'iideystaha: Binance
Tixraaca Code: xxxxx
Magaca bangiga: Clear Junction Limited
Cinwaanka Bangiga: 15 Kingsway, London WC2B 6UN, UK
Muxuu yahay cinwaankeyga 'crypto' USDT, BTC, ETH ... on Binance ?
Haddii aad rabto inaad ogaato cinwaannadaada deebaajiga ah ee loogu talagalay cryptocurrencies kala duwan, raac tilmaamahan!
Tag Portfolio> Spot Portfolio
Beerta "Hel hanti", tilmaan tusaale ahaan USDT.
Qeybta hoose ee bogga, waxaad ka heli doontaa jadwal soo bandhigaya hantidan.
Ka eeg dhinaca midig, tiirka Tallaabada. Waxaad ka heli doontaa xiriiriyeyaal. Guji "Deposit".
Sida ku xusan QR Code, waxaad ka heli doontaa xarfaha xarfaha. Kani waa cinwaankaaga cryptocurrency ee lacagta la raadiyay.
Talooyin iyo tabaha Binance
Sida ugu dhakhsaha badan loogu beddelo EUR USDT ama BUSD on Binance ?
Asal ahaan, Binance ku siin maayo EUR_ lamaaneUSDT aagga ganacsiga. Laakiin la soco in URL-ka uu jiro iyo in beddelku suurtagal yahay.
Labada lamaane ee EUR_USDT : https://www.binance.com/fr/trade/EUR_USDT
Labada lamaane ee EUR_BUSD: https://www.binance.com/fr/trade/EUR_BUSD
Waxaan hada dooneynaa inaan ku iibino lacagtiisa yuuro USDT adoo amar ku bixinaya "Suuqa".
Badhanka "Iibiya Iib", waxaad leedahay Xad u guurista. Markaad u dhaqaaqdo dhinaca midig, waxaad muujineysaa tirada euro ee aad rabto inaad iibiso iyadoo ku saleysan wadarta guud ee saamigaaga.
Dhagsii badhanka "Sell EUR". Amar ayaa la bixin doonaa ka dibna waad heli doontaa USDT.
Ku noqo boorsada jeebka 'Spot Wallet'. Isu dheellitirkaaga 'Crypto', ka hel khadka USDT, waa inaad haysataa tiradaUSDT codsaday.
Comment iibsadaan ama iibiya Cryptos amar xaddidan?
On Binance, waa suurtagal in lagu iibsado Cryptocurrency qaddarka la doonayo, weli waa lagama maarmaan in ay ku timaaddo qiimaha aad sheegtay iyo in ay jirto mug ku filan oo sarrif ah si loo sameeyo iibsigan.
Aynu tusaale ka soo qaadanno urlkan: https://www.binance.com/fr/trade/THETA_USDT
Haatan waxaan ku iibsaneynaa THETA USDT qiimo la rabay.
Gudaha "Qiimaha", sheeg qadarka ku jira USDT inaad diyaar u tahay inaad iibsato si aad u hesho 1 THETA. Halkan qiimaha waa 0,6029. Haddii aad rabto inaad ka jaban tahay, gal tusaale 0,5.
Adoo adeegsanaya dulqeelaha, ku muuji hoosta "Qaddarka" lambarka THETA ee aad rabto inaad ku hesho iyadoo loo eegayo keydkaagaUSDT. Tusaalahan keydkeygu waa 0,5076 USDT.
Goobta "Wadarta" waxay muujineysaa tiradaUSDT inaad bixinayso.
Guji Iibso THETA.
Markaad ansaxiso, amar iibsi ayaa markaa la samayn doonaa muddo aan la cayimin illaa inta xuduudaha iibku aysan ku filnayn. Waad joojin kartaa amarkaaga wakhti kasta: https://www.binance.com/fr/.../openorder
Order Amarkaaga Xaddidan lama soo saarin?
Tan waxaa laga yaabaa inay ugu wacan tahay waqtiga go'aanka oo aad u dheer ⏱. Cusboonaysii bogga, oo dhig wax ka yar 95% heerka tilmaamaha.
Comment sale ama ku iibso Cryptos amar OCO ah?
On Binance kaliya, waxaad kicin kartaa amarrada OCO (Mid-Kan-Burburinta-midka Kale). Sidaa darteed waad ku iibsan kartaa cryptocurrency laba qiimo oo kala duwan, tusaale ahaan markay jabiso iska caabin ama markay taabato taageero.
Dhankeyga, waxaan ku dhaqmaa amarrada OCO inta badan iib ahaan. Xaaladdan gaarka ah, waxaa loo maleynayaa inaad horeyba u laheyd cryptocurrency loo baahan yahay si aad u fuliso amarka iibinta OCO. Haddii kale, fadlan ku iibso crypto-kaaga Nidaamka Xaddidan ama Suuqa. Sidaa darteed waxaad awoodi doontaa inaad ku dhejisid faa'iidadaada Qaadashada iyo Joojintaada joogsi isku mid ah. Marka labada midkood la hawlgaliyo, kan kale ayaa la tirtiri doonaa.
Sida loo dhigo amar OCO ah Binance ?
Tag si aad u sameyso amar, xulo iibinta ka dib OCO ee tabka xaddidan joogsiga.
Buuxi 4-ta beeraha: qiimaha / joogsiga / xadka / qadarka:
- aagga Qiimaha: wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka iibiso bartilmaameedka
- aagga Joogsiga: wuxuu u oggolaanayaa kicinta qalabka wax lagu karsado
- aagga Xaddidaadda: tani waa qiimaha iibka alaabada (qiimaha dareeraha)
- Qaddarka berrinka: tani waa xaddiga loo yaqaan 'crypto' ee aad rabto inaad iibiso
Ugu dambeyntii, dhagsii badhanka Iibinta si aad u dhigto amarka OCO
Fadlan ogow in aagga Joojinta uu marwalba ka weynaado Xadka
Sidee looga bixiyaa Euros koontada bangiga?
Si aad uga baxdo koontadaada Binance koontadooda dhaqameed ee bangiga sida Crédit Agricole, Caisse d'épargne, Crédit Mutuel, BNP Paribas ama shirkadda guud, iwm. waa inaad sheegtaa IBAN-kaaga, laakiin waxaas oo dhan ka sareysa waa inaad haysataa wax yar oo Yuroos ah. Sidaa darteed waa inaad u beddeshaa cryptocurrencies-kaaga euro.
Tag Boorsada> Boorsada Sawirka> EUR (bixitaanka) ama tag cinwaankan: https://www.binance.com/fr/.../fiat/EUR
Xulo wareejinta Bangiga (SEPA)
Muuji qadarka ku jira euro si aad u wareejiso
Muuji xisaabtaada IBAN
Sida loo isticmaalo kaarkaaga Visa Binance ?
Iyada oo la Fiiso Binance, waxaad u rogi kartaa oo aad ku bixin kartaa cryptos aad ugu jeceshahay dukaamada iyo ganacsiyada adduunka. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad ku wareejiso shaashaddaada 'cryptocurrencies' boorsada Card-kaaga Binance.